Ithegi: Ivenkile | Martech Zone
I-Privy: Khulisa iNtengiso yakho yeVenkile ye-Intanethi Ngeli qonga lipheleleyo leNtengiso ye-Ecommerce
NgoLwesibini, Meyi 10, 2022 NgoLwesibini, Meyi 10, 2022 Douglas Karr
Ukuba neqonga lokuthengisa elilungiselelwe kakuhle kunye nelizenzekelayo yinto ebalulekileyo kuyo yonke indawo ye-e-commerce. Kukho iintshukumo ezi-6 ezibalulekileyo ekufuneka zisetyenziswe nasiphi na isicwangciso sokuthengisa nge-e-commerce ngokubhekiselele kwimiyalezo: Khulisa uLuhlu Lwakho -Ukongeza isaphulelo esamkelekileyo, i-spin-to-wins, i-fly-outs, kunye nemikhankaso yokuphuma yokukhulisa uluhlu lwakho kunye nokubonelela Unikezelo olunyanzelisayo lubalulekile ekukhuliseni abafowunelwa bakho. Amaphulo-Ukuthumela ii-imeyile ezamkelekileyo, iileta zeendaba eziqhubekayo, unikezelo lwamaxesha onyaka, kunye nezicatshulwa zokusasaza ukukhuthaza izibonelelo kunye
Besisebenza nzima siphuhlisa udibaniso lweShopify kumxhasi owomeleleyo kwaye ontsokothileyo… kuninzi okuza kulandela xa siyipapasha. Ngalo lonke uphuhliso esilwenzayo, bendinentloni xa bendivavanya indawo yabo ukuze ndibone isaziso selungelo lokushicilela kwi-footer besiphelelwe lixesha… sibonise kunyaka ophelileyo endaweni yalo nyaka. Yayiluqwalaselo olulula njengoko sasifake ikhowudi indawo yokufaka umbhalo ukubonisa
Yintoni iNjongo yokuPhuma? Isetyenziswa Njani Ukuphucula Amazinga oGuqulo?
NgoLwesithathu, Matshi 30, 2022 NgoLwesithathu, Matshi 30, 2022 Douglas Karr
Njengeshishini, utyale itoni yexesha, umzamo, kunye nemali ukuyila iwebhusayithi emnandi okanye indawo ye-e-commerce. Phantse wonke amashishini kunye nomthengisi basebenza nzima ukufumana iindwendwe ezintsha kwindawo yabo… bavelisa amaphepha emveliso amahle, amaphepha okufikela, umxholo, njl njl. Umtyeleli wakho ufike kuba ecinga ukuba uneempendulo, iimveliso, okanye iinkonzo obuzijonga ngenxa. Noko ke, amaxesha amaninzi olo ndwendwe lufika luze lufunde zonke
NgoLwesihlanu, Matshi 25, 2022 NgoLwesihlanu, Matshi 25, 2022 Alexander Frolov
Ishumi leminyaka elidlulileyo lisebenze njengokukhula okukhulu kwintengiso yeempembelelo, ukumisela njengesicwangciso esiliqili ekufuneka sibe neempawu kwiinzame zabo zokunxibelelana nabaphulaphuli abaphambili. Kwaye isibheno sayo simiselwe ukuhlala njengoko iimveliso ezininzi zijonge ukusebenzisana nabaphembeleli ukubonisa ubunyani bazo. Ngokunyuka kwe-ecommerce yentlalo, ukusasazwa ngokutsha kwenkcitho yentengiso ukuphembelela ukuthengisa kumabonwakude nakwimithombo yeendaba engaxhunyiwe kwi-intanethi, kunye nokwandiswa kokwamkelwa kwesoftware yokuthintela intengiso ethintela.
Eyona ndlela ilula yokunciphisa i-Shopify CSS yakho eyakhiwe ngokusetyenziswa kwezinto eziguquguqukayo zolwelo.
NgoLwesihlanu, Februwari 18, 2022 NgoMvulo, Februwari 21, 2022 Douglas Karr
Sakhe indawo yakwaShopify Plus yomthengi oneqela leesetingi zezitayile zabo kweyona fayile yomxholo. Ngelixa oko kuyinzuzo yokulungelelanisa ngokulula izimbo, oko kuthetha ukuba awunayo ifayile yesimbo se-static cascading sheets (CSS) onokuthi uyinciphise ngokulula (ukunciphisa ubungakanani). Ngamanye amaxesha oku kubhekiselwa kuko njengoxinzelelo lweCSS kunye nokucinezela iCSS yakho. Yintoni CSS Miniification? Xa ubhalela kwiphepha lesimbo,